China Kurumidza-Kuomesa Qr Code Isiri-Inotyisa Midhiya 45si 2588 2706K 2589 2580 2590 Cartridge Solvent Ink yeRuoko Jet Coding Printer vagadziri uye vanotengesa | AoBoZi
Kurumidza-Kuoma Qr Code Isiri-Inotyisa Midhiya 45si 2588 2706K 2589 2580 2590 Cartridge Solvent Ink yeRuoko Jet Coding Printer
Kavha Kodhi Kudhinda
Kudhinda Kodhi Kodhi
Chii chinonzi kukodha?
Kunyora kunosanganisira kushandiswa kwemavara, zvimiro, zviratidzo kana mamwe maumbirwo pane chigadzirwa kana pasuru kuburikidza neingi. Mazwi akasiyana siyana anoshandiswa, akadai sekukodha, kudhinda kana kutara, asi ese anoreva zvakafanana. Coding ine akati wandei kunyorera uye zvinangwa uye kune nzira dzakasiyana umo kukodha kunogona kuitika.
Nei uchishandisa kukodha?
Nenzira yekukodha, zvinokwanisika kupa ruzivo zvakananga kune mushandisi. Iwe unogona kusanganisira iyo yekushandisa-nezuva, yekutaurirana data pane yakatumirwa bhokisi, webhusaiti kana mushandisi mirairo. Nekodhi iwe unogona kuita kuti chigadzirwa chizivikanwe. Zvigadzirwa zvakasununguka, mabhokisi kana pallets zvinowanzoitwa kuti zvionekwe kuburikidza nemabhodhi, QR kodhi kana manhamba erudzi. Chinangwa chekunze chekukodha ndechekuti zvigadzirwa zviteedzeke. Iyi iruzivo inogona kuve yakakosha kune vanogadzira. Ivo vega havapi ruzivo. Iwe unogona kufunga nezve batch makodhi, data rekugadzira uye imwe track & yekutsvaga ruzivo.
12.7mm HP 2580/2590 yepakutanga-inomesa inki katuriji uye inoenderana 25.4mm hombe hombe font hombe yakaoma inomirirana neakawanda eakabata ruoko kodhi yekumwaya michina pamusika, online kodhi yekupfira muchina desktop desktop kodhi yekupopera michina uye imwe inopisa inopupuma musoro , isina-kuvhara, isina-kupera, isina mvura uye yakanyanya-tembiricha inodzivirira, ine mushumo wekuyedza.
Yekukurumidza kuomesa nguva ye 2-3 masekondi
Yakareba decap nguva inopfuura awa rimwe
Kuwanda kwakanaka uye rima rakakura kunyangwe pazasi dpi
Yakakwira mhando mufananidzo ine yakapinza micheto
2580 / 2588M / 2588 + M / 2588K / 2586 / 45si / FOL13B, nezvimwewo
Plastiki, Inodzorwa Simbi, Zvizoro, Bhodhoro Rekunwa, Woodiness Board
Chikafu Kavha, Nyowani Zai, Kuteedzera Marble
Kana iyo inki katuriji isiri kushandiswa, inofanira kuvharwa nevhavha. Mushure mekunge inki katuri yabvaruka yakavhurwa uye nekuvharwa, zviri nani kuishandisa mukati memwedzi 3-4.
Pashure: TIJ 2.5 Technology Yekutanga Ink Cartridge ye HP 45A 51645
Zvadaro: Mvura Yakavakirwa Bhodhoro Refill HP 45A Ink Cartridge ye Handheld Coding Printer Kudhinda paPepa Makatoni
Handheld / Oline Maindasitiri anodhinda eCoding ...
18ml Glitter Powder Ruvara Calligraphy Kunyora P ...
Pigment Ink yeEpson / Mimaki / Roland / Mutoh / Canon ...
Zvakatipoteredza Shamwari Eco Solvent ink yeRoland ...
Permanent Marker Pen Ink Kunyora paMatare, Pla ...